मधुमेह धेरै रोगको घर हो – जागरण अनलाइन
मधुमेह धेरै रोगको घर हो
२०७५ कार्तिक २८, बुधबार १२:५९ मा प्रकाशित
डा. प्रकाश सुवेदी
कन्सल्टेन्ट फिजिसियन गोर्खा हस्पिटल घोराही
मधुमे ह दिवस, विभिन्न चे तनामूलक कार्यक्रम गरे र मनाइदै छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ने पालमा १० लाख मानिसमा चिनीरो ग अर्थात मधुमेह लागे को छ भने विश्वमा यो संख्या ३५ करो ड रहे को छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२५ सम्म यो संख्या बढेर ४० करो ड पुग्ने अनुमान गरे को छ । ने पालमा शहरी क्षे त्रमा १८ दे खि २० प्रतिशत र ग्रामीण क्षे त्रमा दुईदे खि पाच प्रतिशत मान्छे
मधुमेह का बिरामी छन् । मधुमेह यस् तो रो ग हो जसका कारणले थुप्रै प्रकारका समस्या उब्जिन्छ र हे लचे क्र्याइ भए ज्यानै जाने गरे को छ । विश्व मधुमे ह दिवसका अवसरमा डा. प्रकाश सुवे दीसग मधुमे हका असर र बच्ने उपायका विषयमा जे .एन.सागरले
गर्नुभएको कुराकानीको सार संक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
मधुमे ह के हो ?
मधुमे ह अर्थात सुगर पनि भन्ने गरिन्छ । हाम्रो शरीरमा उत्पादन हुने इन्सुलिन हमोर् नको कमीको कारणले रगतमा चिनीको मात्रा बढी भएको अवस् था हो  । जसले गर्दा शरीरका धे रै ठाउमा असर पनेर् हुन्छ । साधारणरुपले हे र्दा रगतमा चिनीको मात्रा बढ्नु मधुमे ह हो  । सामान्यतयाः मधुमे ह तीन प्रकारका हुन्छन् । प्रथम प्रकारको मधुमेह, दास्रो प्रकारको मधुमेह र तेस्रो प्रकारको मधुमेह । प्रथम प्रकारको मधुमेह भने को चाहि“ शरीरमा इन्सुलिनको उत्पादन ह“ुदै नहुने अवस्था हो  । जसलाई हामी इन्सुलिन औ षधि नै दिन्छौ ं । यो खासगरी कम उमे रका मान्छे हरुलाई दे खिन्छ । तर अहिले ठूलो उमे रका मान्छे हरुलाई पनि दे खिन थाले को छ । दोस्रो प्रकारको मधुमेह भने को चाहि ४० वर्ष माथिका मान्छे हरुलाई दे खिने गर्दछ प्रायः । जसमा जति इन्सुलिनको मात्रा हुनुपनेर् हो त्यति नहुने तर उत्पादन हुदै नहुने हो इन, अलि कम उत्पादन हुदा रगतमा चिनीको मात्रा बढे को हुन्छ । तेस्रो प्रकारको मधुमेह भनेको गर्भावस्थामै हुने रोग हो ।
इन्सुलिनको कमी हुने अवस् था कसरी आउछ ?
ठ्याक्कै यसरी उत्पादन रो किन्छ इन्सुलिनको भन्ने छै न । तर अध्ययनहरुले एउटा बंशाणुगत कारण, जीवनशै लीका कारण, मो टो पना र वातावरणीय हिसावले इन्सुलिनको उत्पादन रो किने वा कम उत्पादन हुने हुन्छ । सानो मा प्याङक्रियाजमा संक्रमण भयो  । कुनै भाइरसले आक्रमण ग¥यो जसका कारणले इन्सुलिन उत्पादन भएन । अकोर् भने को अटो इम्युन अर्थात हाम्रो शरीरमा रो गका बिरुद्ध लड्ने से तो को षिकाहरु छन् । बाहिरबाट आउने किटाणुहरुलाई आक्रमण गर्छन् तर से तो को षिकाले कहिले काही आफनै शरीरका अन्य को षलाई नचिने र आक्रमण गरे र मार्छ । जस् तो इन्सुलिन आफ्नै हो भने र चिने न र ग्रन्थीमै आक्रमण ग¥यो भने इन्सुलिन उत्पादन बन्द हुन्छ । तसर्थ यसकै कारणले इन्सुलिन उत्पादन बन्द हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि आमरुपमा हे र्दा मो टो पना, जीवनशै ली आदिका कारणले हुन्छ ।
कसरी लाग्छ ?
मुख्य कुरा खानपिन हो  । सा“झ पनि बिहान पनि भात खान्छौ ं । भातमा धे रै भन्दा धे रै कार्बाे हाइड्रे ट पाइन्छ । अकोर् कुरा पहिले –पहिले मानिसले दिनभर कडा परिश्रम गथेर् । अहिले पनि गाउ“घरमा गरिन्छ । तर शहरी क्षे त्रमा कम परिश्रम गरिन्छ । दिनमा आधा घण्टा पनि हिडिदै न । खाना कावोर् हाइड्रे डयुक्त खाइन्छ । परिश्रम नगर्दा त्यो कावोर् हाइड्रे डले तौ ल बढाउछ । जसले गर्दा मधुमे ह हुन्छ ।
सामान्यतयाः प्याङक्रियाज ग्रन्थीले इन्सुलिन उत्पादन गर्छ । त्यसले उत्पादन नगर्दा हमोर् नको कमीले मधुमे ह दे खिने हो  । इन्सुलिनले खानाबाट बने को सुगरलाई रगतमार्फत शरीरका विभिन्न ठाउमा पु¥याउने काम गर्छ । जब इन्सुलिन उत्पादन रो किन्छ खानाबाट बने को सुगर रगतमै थुप्रिन थाल्छ । बढ्दै बढ्दै गएर रो गकै अवस्थामा पुग्छ । सामान्यतया हामीले खाना खाएपछि बने को ग्लूको जलाई इन्सुलिनले शरीरका विभिन्न को षसम्म पु¥याउने र बढी भए लिभर, मसल्समा स् टो र गर्छ । तर इन्सुलिन भएन भने रगतमा सुगर बढ्दै जान्छ शरीरका को षसम्म पुग्दै न । शक्तिजति रगतमा थिग्रिने अनि मान्छे भो को भइरहने अवस्थालाई हामी सुगर भन्छौ ं ।
कम उमे रका मान्छे मा पनि टाइप टू सुगर दे खिने कारण खानपिन र जीवनशै ली नै हो उसो भए ?
हो  । २५÷३० वर्षमा दे खिने टाइप वान हो  । तर अहिले ३०/३५ वर्षका उमे र समूहमा पनि टाइप टु दे खिन थाले को छ । त्यो भने को खानपान, भद्दा जीवनशै ली, शारीरिक व्यायाम नहुनु र परिश्रम कम हुनु नै हो  ।
लाग्नै नदिन के गर्नु¥यो ?
तौ ल सन्तुलनमा ध्यान दिनुपर्छ । कावोर् हाइड्रे डयुक्त खाना भन्दा पनि अलि सन्तुलित खाना खानुप¥यो  । जस् तो कावोर् हाइड्रे ड, प्रो टिन, मिनिरल्स्, भिटामिन, रे सादार खानाहरु, स् लादहरु धे रै खानुप¥यो  । अकोर् कुरा काम अनुसारको खाना खानुप¥यो  । ज्यामी काम गर्दा ३५ सय चार हजार क्यालो री आवश्यक पर्छ । धे रै खानुप¥यो तर अफिसमा बस् ने शारीरिक परिश्रम नै नगरी काम गनेर् मान्छे ले धे रै खा“दा बचे को क्यालो रीले तौ ल बढाउने हुन्छ । त्यसै ले जति काम गरिन्छ सो ही अनुसारको खाना खानुपर्छ । त्यो बाहे क दिनमा आधा घण्टा÷एक घण्टा हिड्ने , स् वीमिङ गनेर् , साइकिलिङ गनेर् अर्थात पसिना निस् िकने गरी के ही न के ही गनेर् हो भने यस्तो समस्याबाट जो गिन सकिन्छ । जे हो स् एक्टिभ लाइफस् टाइल बनाउन जरुरी छ । हामीलाई भन्नुहुन्छ धे रै काम गर्छु । मर्निङ वाक गर्छु भने र तर सुगरको समस्या आउछ । हिडे र मात्रै हुदै न खलखली पसिना आउने गरी हिड्नुपर्छ ।
रो ग लागे को कसरी थाहा पाउने ?
यो अलि गाह्रो छ सजिलै थाहा पाउन । किनभने सुगरको लक्षण सबै मा वा शुरुमै दे खिदै न । मुख सुक्ने , तिर्खा लागिराख्ने , पिसाव छिन–छिनमा आउने , शरीर पुरै थकाइको महसुस हुने , आलस् य हुने , काम गर्न जागर नलाग्ने , कसै –कसै लाई लगातार टाउको दुख्ने , आखा धमिलो दे खिने हुन्छ तर यो सुगरको मात्रा धे रै भइसक्यो भने मात्रै दे खिन्छ । धे रै जनाको लक्षणबिना नै सुगर भइसके को हुन्छ । मे डिकल जा“चबाटै थाहा हुन्छ । सामान्यतया खाली पे ट हुदा १२६ र खाना खादा १४० दे खि १९० सम्मलाई सुगर मानिदै न त्यो भन्दा बढी भएको अवस् था छ भने त्यसलाई हामी सुगर भन्छौ ं । औ षधि चलाउछौ ं ।
सञ्चो नहुने रो ग भन्नुप¥यो है न ?
हो  । अहिले सम्म यसलाई निर्मूल गर्न सकिएको अवस् था छै न । तर यसलाई निर्मूल बनाउन सकिने तर्फ अध्ययन भइरहे को बुझिएको छ । सधै औ षधि खाने वा इन्सुलिन लगाउने मात्रै भएको छ ।
रो ग एक, असर अने क देखिन्छ है न त ?
हो  । आखाको ज्यो ति गुम्ने समस् या सबै भन्दा धे रै सुगरका कारणले भएको तथ्यांकले दे खाएको छ । त्यस् तै किड्नी फे ल हुने मुख्य कारण सुगर हो  । अकोर् खतरा भने को पक्षाघात पनि हो  ।
सुगरकै कारण पक्षाघात हुने सम्भावना धे रै छ । यसै गरी हर्टअट्याक पनि सुगरकै कारणले धे रै हुन्छ । त्यस् तै नसा दुख्ने , हात खुट्टा झमझमाउने यावत समस् या सुगरले निम्त्याउने गरे को छ । तसर्थ यसको रो कथाम गर्नुभन्दा हुनै नदिनतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ ।
रो गहरुको घर भने पनि भो सुगरलाई ?
हो  । सुगरकै कारणले थुप्रै समस् या दे खिएका छन् । सामान्य यसको साइकिल हे ¥यौ ं भने मानिसले कावोर् हाइड्रे डयुक्त खाना खान्छ जसले मो टो पना बढाउछ । मो टो पनाले डायविटिज निम्त्याउछ र डायविटिजका कारण मृगौ ला फे ल, आखाको दृष्टि गुम्ने , हर्टअट्याक हुने , प्रेसर, जो नी दुख्ने लगायतका थुप्रै रो ग थपिदै जान्छन् । यसर्थ सजग हुनुपर्छ । बे ला–बे लामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र शरीरलाई चलायमान बनाउन जरुरी छ ।
यति गर्दा पनि लागिहाले के गनेर् ?
सुगर भइसक्यो भने तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । खानपिनमा सन्तुलन मिलाउने  । शारीरिक व्यायाम र औ षधि उपचार गनेर् कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ । औ षधिमा इन्सुलिन लिनुपनेर् अवस् था भए इन्सुलिन लिने र नियमित ट्यावले ट खानुपर्छ । अरु त जीवनशै लीलाई चलायमान बनाउने , खानपानमा ध्यान दिने नै हो  । त्यो बाहे क डाक्टरको सल्लाह अनुसार नियमित सुगर जाच गराउनुपर्छ । सुगरकै कारणले किड्नी, मुटु र आखामा असर परे को छ कि ? नियमित चे क गराउनुपर्छ ।
सन्तुलित खाना भन्नाले के खाने के नखाने ?
सुगर भइसके को मान्छे ले कावोर् हाइडे «डयुक्त खाना कम खानुप¥यो  । कसै ले के भन्नुहुन्छ भने चामल छो डिसकें मकै मात्रै खान्छु । रोटीमात्र खान्छु भन्नुहुन्छ त्यसको कुनै अर्थ छै न । जे सुकै खानुस् गएर बन्ने भने को सुगर नै हो  । चामल खानुस्, मकै खानुस् वा रो टी खानुस् बन्ने सुगर नै हो  । तर गर्नु पनेर् के हो भन्दा त्यसको मात्रा कम गनेर् हो  । कावोर्हाइड्रे डको मात्रा कम गनेर् हो  । तर प्रो टिन, स् लाद बढाउनुप¥यो भने चिल्लो कम खानुप¥यो  । दूध से वन कम गर्नुप¥यो  ।
गुलियो नखाने तर फलफूल खाइहाले के ही असर गदैर्न र ?
मै ले भनिहाले हामीले खाएको खानाबाट ग्लूको ज बन्ने हो अर्थात सुगर बन्ने हो  । चिनी खानु र फलफूल खानु उस् तै त हो नि । गुलियो धे रै भएर सुगर हुने हो  । त्यसमा झन गुलियो खाएपछि झन बढ्ने हो  । तर मात्रा मिलाएर कहिले काहीं खान सकिन्छ, खानै नमिल्ने भन्ने हो इन । सकभर गुलियो बढाउने वस् तु नखाएकै राम्रो हुन्छ । तर आलु, मिठाईजस्ता वस्तु खानै हुदै न ।
समग्रमा मधुमे हबाट जो गिन आम पाठकहरुलाई यहाको सुझाव के ही छ ?
सबै भन्दा रो ग लाग्नै नदिनका लागि सजग हुनुप¥यो  । तौ ल, बढ्यो , के ही त्यस्तो शंका लाग्यो भने सुगर जाच गरौ ं । अझ ४० भन्दा माथिकाले त नियमित जाच गरौ ं । आजभो लि त जताततै रगत परीक्षणको काम भइहाल्छ । सुगर भएका मान्छे हरु फ्लो अपमा रहनुप¥यो  । मुख्य कुरा हुनै नदिनका लागि खानपिन, भद्दा जीवनशै लीलाई बदल्नुप¥यो  । व्यायामलाई ध्यान दिनुप¥यो र सबै भन्दा तौल र मो टो पना घटनाउने तर्फ क्रियाशील गराउनुप¥यो  । यसतर्फ ध्यान दिन म सबै लाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
सडक विस्तार नै पहिलो प्राथमिकताः वडाध्यक्ष बुढा २०७५ कार्तिक २८, बुधबार १२:५९
सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा पुु¥याउने अभियानमा छौं २०७५ कार्तिक २८, बुधबार १२:५९
सहकारी समृद्धिको आधार हो २०७५ कार्तिक २८, बुधबार १२:५९